१८:०४, ३१ अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन
३ बाइटहरू हटाइयाे , ४ महिना पहिले
१२:४९, २७ अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (- जस्को + जसको ))
१८:०४, ३१ अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
*[[कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, नाछिरिङ, खालिङ ]]
किराँत भनेको नेपालका प्रबजित जाति थियो.किराँतहरूको बसोबास नेपालको पूर्ब र हिमाल सम्म फैलिएको छ भने भारतको असाम,बङ्गाल देखि लिएर त्रीपुरा सम्म रहेको छ. यो जाति भनेको नेपालको सबै भन्दा कम जनसङ्ह्य भाको जाति हो र नेपालमा खेतिको सुरुवात् गर्नुका साथै सुङुर पालन आरम्भ गर्ने यिनै जाती हुन. [[काठमाडौँ]]का गोपाल राजालाई हटाएर [[यलम्बर]] पहिला किराँती राजा भएका थिए. [[चीन]]को [[तिब्बत]]सग इनिहरूले निक्कै रम्रो बेपार् गरेका थिए। त्यस्तो बेपार् अहिले सम्मको सरकार्ले पनि गर्न सकेको छैन । किनभने त्यतिबेलाको नेपाली मुद्रा तिब्बेत्मा चल्थियो। र मुख्य कुर के भने किरात जातिको उद्द्गम स्थल पनि चिन नै भयेको अनुमान छ।[[चीन]]को ह्यन्ग्गो र यान्सिकन्ग् भन्ने नदिको किनार लाइ किरात उद्द्गम स्थल मानिएको छ। र त्यहा बाटत्यहाबाट शिकार् गर्न भारतको उत्तर् पूर्वि पहाड् तिर आये र त्यहाको [[कैलाश]] पहाड्मा केही बर्स बसेको इतिहास् म पड्न पाइन्छ्. र त्यहा कुरा अनुकुल् हावा पानीको खोजिमा नेपाल्को पूर्वि भाग् हुदै काठमाडौँसम्म आइपुगेको हो. र अहिले सम्म इनिहरूले राज्नीतिक् शैशिक् छेत्रम धेरै विकास् गरेको छ।
"किरात" शब्दकाे स्वरूपसंग नजिक भएका संस्कृत शब्दहरू हेराैँ । जस्तै: "किरति", "किरीट", "किरिटी" । यदि किरात संस्कृत भाषाबाटै आएकाे हाे भने यिनै शब्दहरू अपभ्रंश भएर आएकाे हुनुपर्छ ।
संस्कृतकाे "किरति" काे अर्थ "छर्नु/ फैलिनु/ to scatter" हुन्छ । "किरति" बाट "किराती" बन्न सक्छ । यदि याे हाे भने किरातीकाे अर्थ चारै दिशामा विस्तारित रूपमा फैलिएर रहेकाे जाति हुन्छ ।
संस्कृतबाट आएकाे "किरीट" शब्दकाे अर्थ "मुकुट/श्रीपेच/crown" हुन्छ । याे मुकुट/श्रीपेच लगाउनेलाई संस्कृतमै "किरिटी" भनिन्छ र "किरिटी" काे अर्थ राजा हाे । "किरीट" बाट "किरात" बन्न सक्छ र "किरिटी"बाट "किराती" हुन सक्छ । यदि संस्कृतबाटै किरात हुन आएकाे हाे भने किरातकाे अर्थ मुकुट लगाउने राजा हुन्छ ।
अतः किरातलाई हामीले संस्कृतबाट नै आएकाे हाे भनेर जिद्दी गर्ने हाे भने पनि "किरात" शब्दकाे साईनाे "सुँगेर पालेर जीविका धन्ने" कुरासंग हुनै सक्दैन ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/891493" बाट अनुप्रेषित